Afar ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha Galmudug oo qaadacay doorashada – Hornafrik Media Network
Afar musharrax oo muhiim ah, ayaa qaaddacay doorashada madaxtinimada dowlad goboleedka Galmudug, kadib markii ay sheegeen in dowladda Federaalka Soomaaliya ay af-duubtay Hannaankii doorashada.
Madaxweynihii hore ee maamulka ayey sheegeen inuu Gaalkacyo ka wado dhismaha maamul feer socda kan Dhuusamareeb, inla qanciyana ay aheyd inta laan la qaban dorashada madaxweynaha, balse dhegaha laga fureystay, sida ay hadalka u dhigeen.
1-inaysan ka qeyb galin doorasho ay maamulayaan qeyb ka mid ah guddiga doorashada oo kala qeybsan, Jadwalka ay soo saareena uu yahay mid aan la aqbali karin.
1-iyo in guddoonka Baarlamaanku uu u howlgalo dib u mideynta guddiga doorashada, lana joojiyo in garab ka mid ah guddiga loo afduubo howlaha doorasho ee mamulka.
Afac9d3e 27dd 4253 908a C0efd4747bf9
Dad hor leh oo u dhintay cudurka cusub ee ka dilaacay dalka Shiinaha.